သမ္မတ ဦးစိန်လွင်နှင့် လူသတ်သမား ရောင်ကြီးဗွေ - Yangon Media Group
သမ္မတ ဦးစိန်လွင်နှင့် လူသတ်သမား ရောင်ကြီးဗွေ
““ စိန်လွင် ပြုတ်ပြီဗျ”” ရန်ကုန်ဆန်္ဒပြပွဲများ လေးရက် မြောက်နေ့တွင် အောင်သိန်းဝင်းက ဆန္ဒပြပွဲမှအပြန် ကိုသန်းအောင်အား ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အောင်သိန်းဝင်းပြောသည့်စကားကို ကိုသန်းအောင် နားမလည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် အောင်သိန်းဝင်း အတော်အော်ဟစ်လာပုံရသည်။ သူ့အသံက အစ်တစ်တစ်၊ အသံဝင် နေပုံရသည်။ ယင်းအတွက် အောင်သိန်းဝင်း ပြောသည့်စကားကို ကိုသန်းအောင် မသဲကွဲ၍ မဟုတ်၊ သိသည်၊ နားလည်သည်။ သမ္မတ ဦးစိန်လွင် ဘာကြောင့်ပြုတ်သည်ကို နားမလည် ခြင်း ဖြစ်သည်။
““သမ္မတဦးစိန်လွင်က ဘာလို့ပြုတ်တာ တုံးဟ””
““ပြုတ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုသန်း အောင်ရာ။ ကျွန်တော် စကားပြောလော သွားလို့ပါ။ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအရ နုတ်ထွက်တာပါ””
““အေးပါကွာ။ ပြုတ်တာပဲပြောပြော၊ နုတ်ထွက်တာပဲပြောပြော အတူတူပါပဲ ကွာ။ လိုရင်းပြောပါဦး””
““ဦးစိန်လွင်က မဆလဥက္ကဋ္ဌရော၊ ဗဟို ကော်မတီဝင်ကရော နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်တာဗျ။ အလွယ်ပြော ရရင် ပြုတ်တာပေါ့။ သူ့မှာ ဘာအာဏာ မှ မရှိတော့ဘူး ကိုသန်းအောင်””
““ဘာဖြစ်လို့ မင်းထင်လဲ အောင်သိန်းဝင်း””
““ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင် ရှစ်ရက် ရှစ်လ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်နေ့ တစ်ပြည်လုံး ဆန်္ဒပြပွဲတွေမှာ ဆန်္ဒပြပွဲတွေဖြိုခွဲဖို့ ပစ်မိန့်ပေးခဲ့လို့ ထင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိပုံရတယ်။ ဒီတော့ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းတဲ့ သဘောပေါ့။ ပြည်သူ့လွှတ် တော် အရေးပေါ်ညီလာခံကို ၁၉ရက် နေ့မှာ ခေါ်ထားတယ်ဗျ။ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလဲ ပြည်သူများထံ တင်ပြချက်ဆိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗျ””
““ဦးစိန်လွင်ပြုတ်တာ မင်းပြောတာနဲ့ မလုံ လောက်ဘူး ထင်တယ်ကွ အောင်သိန်းဝင်းရ””
““အရှင်းဆုံးပြောရရင် ကိုသန်းအောင်ရာ ဦးနေ၀င်းက ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး၊ သမ္မတရာထူး၊ တပ်မတော် ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် မဟုတ်တော့ပေမယ့် အာဏာ ရှိနေတုန်းပဲဗျ။ သူရွှေ့တဲ့အကွက် တွေနေမှာပေါ့””
အောင်သိန်းဝင်းက ကိုသန်းအောင်ကို သူ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောရင်း ရေချိုးဆင်း သွားသည်။ ယင်းနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ ထမင်းစား သွားသည်။ ကိုသန်းအောင်က ဘယ်သွားစားမှာလဲဟု မေးသည့်အမေးကို ပင် မဖြေနိုင်။ အောင်သိန်းဝင်းအား ထမင်း ကျွေးမည့်သူ များများစားစားမရှိ။ လမ်းထိပ် ဈေးဆိုင်က ၀ါဝါဆိုသည့် ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးက ပုံမှန်ညနေစာကျွေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း ဆန်္ဒပြ ပွဲများ ကျဲသွားသော်လည်း ဆန်လုပွဲသတင်း များကို ကြားနေရသည်။ ဆန်ဂိုထောင်ဖောက် ကြသည်။ ရပ်ကွက်ကောင်စီရုံးများ မီးရှို့ခံရ သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ် ဖြစ်ကာ အခြေအနေဆိုးရွားနေသည်။ ရန်ကုန် မြို့တွင်း ဆန်္ဒပြပွဲများလည်း မရှိသလောက် ပင် နည်းသွားသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရှစ်မြို့ နယ်နှင့် ဒဂုံ၊ အလုံနှင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တို့ လမ်းများ ပိတ်ဆို့ထားသဖြင့် ရှင်းလင်းဖယ် ရှားကြသည်။ ယင်းနောက် ရန်ကုန်မြို့တွင်း တွင် ပုံမှန်အတိုင်း အသွားအလာရှိလာသည်။
ယင်းအတွက် အောင်သိန်းဝင်းက ရုံး တက်လိုက်၊ ရုံးပျက်လိုက်နှင့် နိုင်ငံရေးသတင်း များကို နားစွင့်နေသည်။ စနည်းနာနေသည်။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊ အစ်္စ လာမ် ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့၊ ခရစ်ယာန် သာသနာရေးအဖွဲ့နှင့် ဟိန်္ဒူသာသနာရေး ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များက ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် မေတ်္တာရပ်ခံချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
““ကိုသန်းအောင်ရေ သြဂုတ် ၈ရက်က နေ ၁၄ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်အတွင်း သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ စာရင်း ဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်တယ်ဗျ””
““ဘယ်မှာထုတ်ပြန်တာလဲ အောင်သိန်း ၀င်းရ””
““သတင်းစာမှာပေါ့ဗျာ၊ အရပ်သားသေ ဆုံးသူ ၁၁၄ယောက်၊ ဒဏ်ရာရတာက ၃၃၆ယောက်နဲ့ အဖမ်းခံရတဲ့သူ ၂၉၆၅ ဦးတောင် ရှိတယ်ဗျ””
““လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရော စာရင်း မထုတ်ပြန်ဘူးလား””
““ထုတ်ပြန်တာပေါ့ ကိုသန်းအောင်ရာ။ တပ်မတော်က နှစ်ယောက်သေ ၁၀ဦး ဒဏ်ရာရ၊ လက်နက်တစ်လက် ဆုံးရှုံး တဲ့ဗျ။ ရဲ ၁၆ယောက်သေ၊ ဒဏ်ရာ လေးဦးရ၊ လက်နက် ၂၇ လက် ဆုံးရှုံး တယ်ဗျ။ ရော့ဗျာ အသေးစိတ်သိချင် ရင် ဒီသတင်းစာသာ ဖတ်ကြည့်””
အောင်သိန်းဝင်းက ကိုသန်းအောင်အား သြဂုတ် ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာအား ပစ်ပေး၍ အိမ် ပေါ်မှ ဆင်းသွားသည်။ ၀ါဝါတို့အိမ် ထမင်းစားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အောင်သိန်းဝင်း ထမင်းစားရန် နောက်ကျနေ သဖြင့် ၀ါဝါက မျှော်နေသည်။ ၀ါဝါက အောင်သိန်းဝင်း အား ထမင်းကျွေးရန်စောင့်ရင်း ဆိုင်သိမ်းနေသည်။ အောင်သိန်းဝင်းလာမှ ၀ါဝါခမျာ အပြုံးမျက်နှာ သမ်းလာ သည်။ အောင်သိန်းဝင်းကိုမြင်သည်နှင့် ၀ါဝါက ဆီးကြို နှုတ်ဆက်သည်။
““ကိုအောင်သိန်းဝင်း ဒီနေ့ နောက်ကျတယ်နော်၊ ဘာများဖြစ်နေလဲလို့ စိတ်ပူလိုက်ရတာ၊ ထမင်းရော စားပြီးပြီလား””
““မစားရသေးပါဘူး ၀ါဝါရယ်၊ ကားမရှိလို့ လမ်း လျှောက်ပြန်လာရလို့ပါ””
““ထင်သားပဲ။ ကိုအောင်သိန်းဝင်း ကြိုက်တဲ့ ပဲရေပွ ကြော်ရယ်၊ ကြာကြီးငါးပိချက်ရယ်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်း ချို ချက်ထားတယ်””
““ကိုအောင်သိန်းဝင်း ခဏနော်၊ ဒီဟာ လက်စသိမ်း လိုက်ဦးမယ်””
၀ါဝါက သူ့ဈေးဆိုင်ပိတ်ပြီးသည်နှင့် အောင်သိန်း ၀င်းကို ထမင်းခူးကျွေးသည်။ အောင်သိန်းဝင်းမှာ ၀ါဝါတို့ မိသားစု ရှိနေသဖြင့် ထမင်းနပ်မှန်နေသည်။ ခါတိုင်းဆို အောင်သိန်းဝင်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ချက်စားရသည်။ ဆန်္ဒ ပြပွဲကာလရောက်မှသာ ၀ါဝါတို့အိမ်တွင် ထမင်းစားဖြစ် သည်။ ၀ါဝါက အောင်သိန်းဝင်းအပေါ် မေတ်္တာသက်ဝင် နေသည်။ သံယောဇဉ်ရှိနေသည်ကို အောင်သိန်းဝင်း သတိ ထားမိသည်။ အောင်သိန်းဝင်းက ၀ါဝါအပေါ် အချစ် မေတ်္တာနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွင့်မပြော။
““ကိုအောင်သိန်းဝင်းရယ် မိုးချုပ်အောင် မနေပါနဲ့။ အခုခေတ်က ထစ်ခနဲဆို လူသတ်တာတော့””
““ဘာဖြစ်လို့တုံး ၀ါဝါရဲ့။ ဘာသတင်းတွေကြားလို့လဲ””
““ဘာဖြစ်ရမှာလဲ ကိုအောင်သိန်းဝင်းရယ်။ ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရောင်ကြီးဗွေလိုလူမျိုးနဲ့ တွေ့ရင် ကိုအောင်သိန်းဝင်း မလွယ်ဘူးတော့””
““အို ၀ါဝါရယ် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဟာ။ အခု ရောင်ကြီးဗွေ ကို ဖမ်းမိသွားပါပြီဟ””
““ဟင် ဟုတ်လို့လား။ ဘယ်တုန်းက ဖမ်းမိသွားတာလဲ””
““ကြာပါပြီဟာ။ သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့ကတည်းက ဖမ်းမိသွားတာ””
““ကိုအောင်သိန်းဝင်း ရောင်ကြီးဗွေက ဘယ်လိုလူ မျိုးလဲဟင်။ သေနတ်ပြီး ဓားပြီး တုတ်ပြီးဆိုတော့””
““မဟုတ်ပါဘူးဝါ၀ါရယ် ဘာ တုတ်၊ ဓား၊ သေနတ်မှ မပြီးဘူး။ သူ့နာမည်ရင်းက စောအောင်တဲ့။ တက်္က သိုလ်ကျောင်းသားလဲ မဟုတ်ဘူး။ ခြောက်တန်း တောင် မအောင်ဘူးဟ။ ဒူးရင်းသီးသည်ပါ။ မိုက် တဲ့သူ ဗိုလ်ဖြစ်တာပေါ့။ ထောက်လှမ်းရေးဆိုတဲ့ လူ တစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတော့ ဖမ်းပြီး သတ်၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့အတူ မီးရှို့ရာကနေ နာမည်ကြီးလာတာ ဟ””
““နောက် ရောင်ကြီးဗွေကို ဘယ်လိုဖမ်းမိသွားတာ လဲ ကိုအောင်သိန်းဝင်း””
““ရောင်ကြီးဗွေက သူ့မှာ အုပ်စုရှိတယ်။ နောက်တော့ နှင်းဆီ၊ နေကြာ၊ ဂန်္ဓမာလို့ အမည်ခံထားတဲ့ အုပ်စု တွေနဲ့ပေါင်းပြီး မြောက်ဥက်္ကလာရဲစခန်း ၀င်စီးပြီး သေနတ်တွေလု ရဲစခန်းမီးရှို့တော့ ပိုနာမည်ကြီး သွားတာ။ အဲဒီသူ့အုပ်စုတွေထဲက ဂန်္ဓမာအဖွဲ့က ရဲသုံးယောက်ကိုဖမ်းပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပဲ””
““အမယ်လေး ကြောက်စရာကြီးနော်။ ကိုအောင် သိန်းဝင်း ပြောတာနဲ့တောင် ကျောချမ်းတယ်””
““နောက်တော့ ရောင်ကြီးဗွေကို ဓားပြဆိုပြီး ကျောင်း သားတွေနဲ့ အရပ်သားတွေ ၀ိုင်းပြီးဖမ်းကြတာ။ မိ တော့ သစ်ပင်မှာကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး သတ်ခိုင်းတာ။ သတ် ရဲတဲ့လူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးဟ။ နောက်တော့ ရောင်ကြီးဗွေကို စစ်တပ်လက်ထဲ အပ်လိုက်တာဆို ပါတော့။ အဲဒီမှာ ရောင်ကြီးဗွေ အဖမ်းခံရတာပါ””
““အင်း ကိုအောင်သိန်းဝင်းပြောလို့သာ ရောင်ကြီး ဗွေနာမည်က မသေသေးဘူးတော့။ နောက်ထပ် ရောင်ကြီးဗွေလိုလူတွေ ပေါ်လာရင် မလွယ်ဘူး ကို အောင်သိန်းဝင်းရယ် သတိထားပါဦး””
အောင်သိန်းဝင်းအပေါ် ၀ါဝါက ကရုဏာသံအပြည့် နှင့်ပြောသည်ကို ၀ါဝါ၏အသံအနိမ့်အမြင့်က သက်သေ ပြနေသည်။ အောင်သိန်းဝင်းက ၀ါဝါကို ဘာမျှပြန်မပြော။ ၀ါဝါလက်ကလေးကို တစ်ဖက်ကကိုင်ရင်း တစ်ဖက်က ပုတ်ရင်း မေတ်္တာကရုဏာသဘော သင်္ကေတပြကာ ၀ါဝါ့ အိမ်မှ ပြန်လာခဲ့သည်။ အပြန်လမ်းတွင် အောင်သိန်းဝင်း တွေးမိသည်မှာ မနက်ဖြန် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး လူထုဟောပြောပွဲ သွားရဦးမည်ဟုသာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ် မိသည်။
'ခ' သုံးလုံး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက သရုပ်ဆောင်သစ်များရွေးချယ်
ကျူးဘား သမ္မတနှင့် ဘိုလီဗီးယား သမ္မတတို့ တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး တိုးမြှင့်ရန် ဆွေး?
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှ ဆရာမ ၁၂ဝ ကို စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများမှ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ပြုလုပ်နည်း သင်?
ပင်လုံမြို့ ပအိုဝ်းတောင်ပေါ် ပန်းတင်ဗော် ကုန်းတော်ပေါ်ရှိသော အရံစေတီလေးဆူ ထီးတော်တင်လှူပွဲ